Akhriso+Sawiro:-Lacag ka badan 11 Milyan oo Doollar lagu bixin doono dib u dhiska Kismaayo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Akhriso+Sawiro:-Lacag ka badan 11 Milyan oo Doollar lagu bixin doono dib u dhiska Kismaayo
written by warsan radio 17/04/2018
Wafdi ka socday bangiga Adduunka, wasaaradaha qorsheynta iyo howlaha guud ee dowladda Soomaaliya oo shalay gelinkii danbe soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay kulamo la lahaayeen madaxda Jubbaland, ayadoo kulamadaasi diiradda lagu saarayay mashaariic horumarineed oo laga fulin doono magaalada Kismaayo.
Wafdiga ayaa kulamo la qaatay Wasiiradda wasaaradaha Howlaha guud iyo guryeynta, Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, Amniga iyo Maaliyadda Jubbaland, waxaa sidoo kale kulan ka qeyb galay masuuliyiinta maamulka degmada Kismaayo kan gobolka J/hoose.
Ku simaha Madaxweynaha, ahna Madaxweyne kuxigeenka 1-aad ee Jubbaland Mudane Max’uud Sayid Aadan oo saxaafadda la hadlay maanta kadib markii ay soo idlaadeen kulamada ayaa sheegay in la isku afgartay in mashaariicdan ay fuliso dowlad goboleedka Jubbaland, isagoo intaa ku daray in wax looga qaban doono dhinacyada nadaafadda, dhismaha biyo Mareenno iyo wadooyinka Laami ah, sidoo kale xaafadaha magaalada looga hirgelin doono Nalal.
Mashruucan ayay dowlad goboleedka Jubbaland sheegtay in ay ku bixi doonto in ka badan 11 Milyan oo Doollar.
Arrintan ayaa kusoo beegmeeysa ayadoo wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliya ay hore u shaacisay in dowladda Turkiga ay magalaada Kismaayo ka bilaabi doono howlo dib u dhis ah oo lagu mataaneeynayo magaalada Antalya ee Turkiga iyo Kismaayo.
Akhriso+Sawiro:-Lacag ka badan 11 Milyan oo Doollar lagu bixin doono dib u dhiska Kismaayo was last modified: April 17th, 2018 by warsan radio
Akhriso:- Shirka Golaha Wasiirada lagu magacaabay Safiiro cusub